MDC Alliance Yoti Ichagadza VaChamisa seMutungamiri weNyika
Bato reMDC Alliance rinoti richagadza VaNelson Chamisa semutungamiri wenyika.
Bato reMDC Alliance rinoti richagadza mutungamiri waro, VaNelson Chamisa, semutungamiri wenyika nemusi weMugovera, 15 Gunyana 2018 kunhandare yeGwanzura muHarare apo bato reMDC-T richange richipembera kusvitsa kwaro makore gumi nemapfumbabwe raumbwa.
Mutauriri waVaChamisa, Doctor Nkululeko Sibanda, vanoti hushe kana hutongi hunogadzwa nevanhu vemuZimbabwe vakavhota, kwete kugadzwa nedare redzimhosva kana kugadzwa neZimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Doctor Sibanda vanoramba mashoko ekuti bato ravo riri kutevedzera zvakaitwa nevanopikisa hurumende kuKenya, VaRaila Odinga, avo vakagadzwa hutungamiri hwenyika nevatsigiri vavo mushure mekukundwa musarudzo naVaUhuru Kenyatta muna 2017.
VaChamisa vakakundwa musarudzo idzi nevaive vakamirira Zanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, asi vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Izvi zvakazoita kuti VaChamisa vaende kudare reConstitutional Court, iro rakarasa nyaya yavo zvakazoita kuti VaMnangagwa vagadzwe semutungamiri wenyika.